Dadkii ku barakacay Baydhabo oo la siiyay abuur ay dib ugu tacbadaan beerahooda
Photo | Khadiijo oo dib ugu noqotay tacabka beerteeda oo ku taalla Baydhabo/Muxudiin Xusni/Ergo
Radio Ergo 19 May, 2017 BAY
(ERGO) - Khadiijo Yuusuf Xaaji, waa 38 jir 7 carruur ah heysata, waxa ay ku nooleyd xero barakac oo duleedka Baydhabo ku taalla saddexdii bilood ee la soo dhaafay, kaddib markii ay xoolaheeda uga dhamaadeen abaarta. Hadda waxa ay dib ugu laabatay tuulada Salbuy oo 18 km u jirta Baydhabo oo ay ka billowday tacabka beer ay halkaas ku lahayd. Waxay hadda abuuratay saddex dalag oo kala duwan.
Waxa ay heshay abuur ku filan hal hektar oo kala ah galley, masaggo iyo digir oo ah dalagga laga beerto deegaanka ee biyaha roobka ku baxa iyo lacag kaash ah oo dhan $70 ah, taas oo uu bixiyay Guddiga Arrimaha Qaxootiga ee Norway (NRC) kana mid ah mashruuca dib u celinta dadka soo barakacay.
Khadiijo oo sagaal bil ka hor ay beerteeda ku qallashay abaarta, xoolaheeduna ay dhinteen ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay inay rajeyneyso markan inay keyd wanaagsan ka dhigato beerta, isla markaana ay dalagga ugu horreeya ka iibsato xoolo ay dhaqato.
Lacagta ayay NRC qoyskiisa ugu talagashay saddex bilood ee ugu horreysa inta uu dalagga u soo go’ayo. Qoys kasta waxaa bishan la siiyay labo bilood oo horumaris ah sida uu Raadiyo Ergo u sheegay Qaasim Maxamed Aadan oo ah wakiilka hay’adda ee gobollada Bay iyo Bakool.
Hase yeeshee lacagtaas ayay xustay Khadiijo in aysan ku filneyn dhammaan baahida qoyska, balse waxay ku iibsadaan raashinka iyo caanaha, iyagoo iidaanka u kaashada lacag aan badneyn oo ninkeeda uu mararka qaar ka soo diro magaalada Baydhabo. Wuxuu ka shaqeeyaa jebinta dhagaxa loo adeegsado dhismeyaasha.
“Ujeeddadu ma aha keliya in qoysaskaan nolol loo abuuro ee waxaan dooneynaa in dalagga ay soo saaraan uu gaaro waddanka oo idil iyo in ay ku daydaan qoysaska kale ee weli ku jira xeryaha,” ayuu yiri Qaasim. Qoysaskan oo ay horay u diiwaanegliyay hay’adda, ugana caawisay geed-qaadka iyo carro-gedinta beerahooda waxaa lagu celiyay tuulooyinka Boonkaay, Sulbuy, Reebay, Ismoodnoy iyo Laanbuule, laakiin ma aha dadka keliya ee u baahan caawimaadda.
Roobka gu’ga oo ka da’ay gobollada Bay iyo Bakool ayaa rajo geliyay 157,000 oo qof oo xoolo-dhaqato iyo beeraleey isugu jira oo ku barakacay Baydhabo iyo deegaannada ku xeeran, balse taageerada billowga ah ee la siinayo dadka dib u laabanaya kuma filna baahida hadda jirta.
Xasan Xuseen Maye oo ah 70 jir ka mid ah dadka la caawiyay ayaa Raadiyo Ergo u sheegay inuu hal hektar ku abuuray digir, masaggo iyo galley, balse wuxuu ka walwalsan yahay in roob-la’aantii horay u qallajisay beertiisa ay dib u soo noqoto oo dalagga uu ka baaba’o mar kale. Muddo afar sano ah ayay biyo-yaridu ku adkeysay in uu wax beerto.
“Dalagyada waxa ay ku baxaan muddo gaaban sidaas ayaana ku doortay, dhaqso inaan faa’ido uga helo ayaan rabaa,” ayuu yiri.
Xasan Maye iyo lix wiil oo uu dhalay iyo carruurta ay sii dhaleen waxa ay gelinka hore soo falaan beeraha kale oo ay lacag ka qaataan, si ay ugu noolaadaan, galabkii ayay beertooda falaan.